October 18, 2019 - CeleLove
စကားမပြောနားမကြားသော အမျိုးသမီးတဦးမှ အကူအညီတောင်းခံလာလိုပါ
October 18, 2019 Cele Love 0
စကားမပြောနားမကြားသော အမျိုးသမီးတဦးမှ အကူအညီတောင်းခံလာလိုပါ အကူအညီတောင်းခံလာလို့ပါ…. စကားမပြောနားမကြားသော အမျိုးသမီးတဦးမှ ကျွန်မဆီကိုအကူညီတောင်းခံလာလို့ပါရှင်….ကျွန်မလည်း တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဒီထဲမှာ လာရောက်အကူညီတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်…. ယောကျာ်းက ဖောက်ပြန်လို့ မိန်းမလုပ်သူကပြောတော့ နင့်ကိုကွာမယ် ကလေးထားခဲ့လို့ပြောပါတယ် …။ အဲ့ဒီအမကလည်း သားချည်းပဲ ၂ယောက်မွေးထားတော့ မထားခဲ့နိုင်ဖူးဆိုပီး ယောက္ခမကို အားကိုးတကြီးနဲ့တိုင်ပါတယ် …။ ယောက္ခမကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ […]
” Sulli ကို အင်တာနက်မှာ အမုန်းစာသားရေးခဲ့သူများ ပြန်လည်တောင်းပန် “
” Sulli ကို အင်တာနက်မှာ အမုန်းစာသားရေးခဲ့သူများ ပြန်လည်တောင်းပန် “ တောင်ကိုးရီးယားနာမည်ကြီး Kpop အဆိုတော်အဖွဲ့ F(x) မှ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် Sulli ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ နေအိမ်မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။Sulli […]
သင့်ကို တခြားလူတယောက်က အိပ်မက်မက်စေချင်ရင် လုပ်ပေးရမဲ့အချက်များ……
သင့်ကို တခြားလူတယောက်က အိပ်မက်မက်စေချင်ရင် လုပ်ပေးရမဲ့အချက်များ…… လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အကြောင်း အိပ်မက်စေဖို့ဆိုတာ တော်တော် ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်တောင် ဘာကို မက်ချင်တယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ပြီး အစီအစဉ်ချထားလို့မှမရတာကိုး။ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိပ်မက်ဆိုတာ မသိစိတ်က ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ညဘက်မှာ အိပ်မက်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။ မသိစိတ်ဆိုတာကလဲ […]
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဟိုတယ် ၁၉ လွှာက ခုန်ချကာ အဆုံးစီရင်(ရုပ်သံ)
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဟိုတယ် ၁၉ လွှာက ခုန်ချကာ အဆုံးစီရင်(ရုပ်သံ) မလေးရှားနိုင်ငံ၏ တောင်ထွဋ်ဖျားပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော နာမည်ကျော်ကစားကွင်းနှင့် လောင်းကစားရုံ Casino များရှိရာ Genting Highland ရှိ ဟိုတယ်တစ်လုံး၏ ၁၉ လွှာပေါ်မှ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ခုန်ချကာ အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် …။ […]
ကင်ဆာရောဂါသည် မိခင်ဖြစ်သူ ၏ အသက်အ တွက် သူမ ရဲ့ အပျို စင်ဘဝ ကို ရောင်းချပြီးကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
ကင်ဆာရောဂါသည် မိခင်ဖြစ်သူ ၏ အသက်အ တွက် သူမ ရဲ့ အပျို စင်ဘဝ ကို ရောင်းချပြီးကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး အသက် ၄၅ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Cao ရဲ့အမေဟာ အရေပြားကင်ဆာေ ရာဂါကို ခံစားနေရတာပါ။ နောက်ဆုံး နည်းလမ်းရှာမရတော့တဲ့ အသက်(၁၉)နှစ် အရွယ် […]
“လိပ်ပြာစံအိမ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ချီးမြှင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်တတ်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးကြောင့် နိုင်ငံခြားက ဒါရိုက်တာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အာရှနိုင်ငံ တော်တော်များများကလည်း […]
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတင်လည်း ဘယ်သူမှယုံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကျော်ကျော် င်္ဂလာဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကျော်ကျော်နဲ့ အလှဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး။ ကျော်ကျော်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံကို ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အထင်လွဲတာကိုလည်း ပြန်မဖြေရှင်းခဲ့ဘူးလို့ ဆုမြတ်နိုးဦးက ပြောပါတယ် ..။ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဝတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို လူမှုကွန်ယက် […]
“စပွန်ဆာကဝယ်ပေးတဲ့အိမ်လို့ ဝေဖန်တဲ့အပေါ် ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း”
“စပွန်ဆာကဝယ်ပေးတဲ့အိမ်လို့ ဝေဖန်တဲ့အပေါ် ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း” နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချမ်းချမ်းကတော့ မကြာသေးမီက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောက်ထားတဲ့ သန်လျင်က အိမ်လေးကို “သန်လျင်ကအိမ်လေးအခုမှပြင်လို့ ပြီးတယ်…အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးမလုပ်နိုင်သေးဘူး…ဒါပေမဲ့ပျော်တယ်.အပင်ပန်းခံပြီး ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပြီးသွားလို့ပျော်တယ်…သမီးလေးအတွက်ရေကူးကန်လေးလဲပီးသွားလို့ပိုပျော်တယ်…အိမ်ပတ်ပတ်လည် ဝရံတာလေးတွေ ထည့်ထားတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာမှ အိမ်လေးကိုပြင်ဆင်ထားပုံလေးတွေ မျှဝေခဲ့ပါတယ် ချမ်းချမ်းကတော့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ အားကျ၊ချီးကျူး၊ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသလို့ မနာလိုမုန်းတီသူတွေကတော့ စပွန်ဆာဝယ်ပေးတာဆိုတဲ့ […]